Fomba fianarana: vaovao ratsy roa (fa tsara roa koa) | Fiofanana kognitive
Courses Synchronous (Zoom)
Fianarana tsy mitohy (fidirana mandritra ny androm-piainana)
Fomba fianarana: vaovao ratsy roa (fa tsara roa koa)
Ireo izay miasa amin'ny psikolojia amin'ny fianarana, fanabeazana, pedagogy na fanabeazana dia miafara amin'ny fanandramana ny fanontaniana momba ny "fomba fianarana". Ny hevi-dehibe izay ezahana ampitaina matetika dia roa:
ny olona tsirairay dia samy manana ny fomba fianarany manokana (ohatra, maso, fihainoana na kinestetika);
mianatra tsara kokoa ny olona tsirairay raha atolotra azy amin'ny fomba mifanaraka amin'ny fomba fianarany ny vaovao.
Ireo dia hevitra manaitra, izay tsy isalasalana fa manome fomba fijery tsy dia hentitra loatra momba ny tontolon'ny fianarana (izay heverina ho "bontolo" matetika); avelany izahay hijery ny sekoly (sy mihoatra) ho toe-javatra mavitrika mavitrika miaraka amin'ny fanabeazana manokana sy saika natao ho azy manokana.
Fa tena marina tokoa ve izany?
Tonga eto ny vaovao ratsy voalohany.
Aslaksen sy Lorås nanao famerenana kely ny literatiora siantifika momba an'io lohahevitra io izy ireo, namintina ny valin'ny fikarohana lehibe; Ny zavatra hitan'izy ireo, angona an-tànana, dia izao: mampianatra arakaraka ny fomba fianarany tiany kokoa (ohatra, fampisehoana fampahalalana amin'ny endrika hita maso ho an'ny "mpijery") tsy hitondra tombony azo isaina mihoatra an'izay mianatra amin'ny fomba maotina ankoatry ny iray tiany.
Amin'izany lafiny izany dia tokony hohavaozina ny fomba fiasan'ny mpampianatra maro, indrindra ny fiheverana ny habetsaky ny asa fanampiny izay misy ny fanovana ny fampianarana manaraka ny famantarana izay hita fa neuro-angano fa tsy zava-misy.
Ka inona no ifandraisan'ny fomba fampianarana sy ny finoana momba ny fomba fampianarana?
Tonga eto ny vaovao ratsy faharoa.
Famerenana iray hafa ny literatiora siantifika momba io lohahevitra io nanipika fa ny ankamaroan'ny mpampianatra (89,1%) dia toa resy lahatra amin'ny hatsaran'ny fanabeazana mifototra amin'ny fomba fianarana. Tsy mamporisika intsony ny hoe tsy miova be io finoana io rehefa manohy miasa mandritra ny taona maro isika (na dia tsy maintsy holazaina aza, ireo mpampianatra sy mpampianatra manana ambaratonga ambony indrindra amin'ny fanabeazana dia toa tsy resy lahatra loatra amin'ity neuro-mitolozy ity. ).
Inona no hatao?
Tonga eto ny vaovao tsara voalohany.
Ny dingana voalohany dia ny fanaparitahana vaovao marina mandritra ny fiofanana ho mpampianatra sy ho mpampianatra ho avy; tsia ity, dia toa tsy fandaniam-potoana fotsiny izany: raha ny tena izy, tao anatin'ny fanadihadihana literatiora iray ihany dia hita fa, taorian'ny fampiofanana manokana, ny isan-jaton'ny mpampianatra mbola resy lahatra amin'ny maha-mahasoa ny fomba fiasa mifototra amin'ny fomba fianarana (ao amin'ireo santionany nodinihina, mandalo eo amin'ny salanisa voalohany tamin'ny 78,4% ka hatramin'ny iray amin'ireo 37,1%).
Misy ny manontany tena ankehitriny hoe ahoana no azo hatsaraina ny fianaran'ny mpianatra satria toa tsy mandaitra ny fomba fanabeazana.
Inty ary izao vaovao tsara faharoa: teknika fampianarana sy fianarana tena mandaitra (aseho amin'ny fanandramana) misy e efa nanokana lahatsoratra ho azy ireo izahay. Ary, ato ho ato dia hiverina amin'ny lohahevitra isika miaraka amin'ny a lahatsoratra iray hafa natokana ho an'ny teknika mahomby indrindra.
Azonao atao koa ny liana amin'ny:
Teknika hanatsarana ny fianarana: izay tena mandaitra?
Hatsarao ny fifehezan-tena amin'ny fianarana amin'ny torolàlana tokana
Dyslexia: làlam-pianarana inona?
Mankafy ve ny zava-drehetra?
Afaka mampiofana ny fitadidianao ve ianao?
Misy fiatraikany amin'ny IQ ve ny haavon'ny fanabeazana?
Fahombiazana amin'ny Akademia. Ahiahy, antony manosika ary fifantohana: inona no tena zava-dehibe tokony hatao tsara any am-pianarana?
Ny fiantraikan'ny IQ amin'ny fahombiazan'ny akademika: hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny sekoly
Famonoan-tena mitarika IQ 1 - 0!
Aslaksen, K., & Lorås, H. (2018). Ny fomban-drazan'ny fomba fianarana manokana: famerenana kely. Birao eo amin'ny psikology, 9, 1538.
Newton, PM, & Salvi, A. (2020, Desambra). Manao ahoana ny fahita mahazatra amin'ny finoana ny fomba fianarana neuromyth, ary maninona izany? Famerenana ny rafitra pragmatika. Ao amin'ny Ny sisintany amin'ny fanabeazana(Vol. 5, p. 270). Sisintany.
fianarana, fianarana am-bava, fianarana an-tsary, fomba fianarana
Fomba fianarana: vaovao ratsy roa (fa tsara roa koa)2021-08-232021-08-25http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/stili-di-apprendimento.-due-cattive-notizie-ma-anche-due-buone.jpg200px200px
Mety hahaliana anao koa ianao
Teknika hanatsarana ny fianarana: Iza no tena mandaitra? Fizarana 2
Teknika hanatsarana ny fianarana: Iza no tena mandaitra? Fizarana 1
Manatsara ny fanaraha-maso ny fianarana miaraka amin'ny tondro tsotra
Dyslexia. Inona no fomba fianarana?
Manadino ny mianatra
Ny vokatry ny kobaid amin'ny fiasan-tsainaNeuropsychology
Teknika hanatsarana ny fianarana: Iza no tena mandaitra? Fizarana 2Fianarana, lahatsoratra, fitadidiana, fomba fandinihana, Neuropsychology